Ihe omuma ulo-ikw that nke n’emeputa eletrik, oku, okpomoku na obughi Intanet - Afrikhepri Fondation
wednesday, Jenụwarị 27, 2021
Welcome gburugburu ebe obibi
Ụlọ nche anyanwụ
Mmepụta nke ụlọikwuu na-arụpụta ọkụ eletrik, ọkụ, okpomọkụ na ọbụlagodi ịntanetị
Vị chọrọ ị na-eme kọntaktị na ọdịdị, mana ị na-ahụ ịma ụlọikwuu na-enweghị iru ala? Yabụ chefuo oge ọjọọ na ị nwetala n'oge gara aga ekele nye ụlọ ntu dị n'okpuru. Aha ya bụ "The Tent Solar Concept" ma ọ bụ na French "La Tente Solaire Concept". Emepụtara ya na UK site n'aka Kaleidoscope na otu ndị nkwukọrịta ama ama bụ Orange, ma bụrụ nke e mere maka emume Glastonbury, nke ga-eme n'afọ a na Somerset County, England, n'etiti June 22-26.
Kedu ihe mere ụlọ ntu a ji dị iche? A na-ekpuchi haihe na-etinye ume nke anyanwụ na na-abanye n'ime ọkụ eletrik. Ị nwere ike ịhụ ọkwa ọkwa site na ihuenyo LCD. Nke a na-eme ka ndị mara ụlọikwuu nwee ike enwere ọkụ, kpo oku, ntinye nke magnet na-akwụ ụgwọ ekwentị na mbadamba, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughị, nke a ịntanetị convection.
Manye? E nwere ndị ọzọ. Ụlọ ndị a nwere ngwaọrụ nke ịma ụda anyanwụ nke na-enye ohere nke ụlọ ahụ (ebe a na-etinye oghere ndị dị na mbara igwe) gbalịa soro usoro nke anyanwụ. Nke a na - eme ka enwere ike ijide ụzarị ọkụ ọbụlagodi na ihu igwe ojii, na ịnweta ọmarịcha ahụmịhe na okike, ebe ị na - agaghị efunahụ oke "nkasi obi nke ụlọ".
"The Contain Solar Tent" ka dị ugbu a n'ahịa, ma ọ kabeghị ọnụahịa atụmatụ. Ọ bụ ezie na ejiri m n’aka na ọ ga-aba uru ichere dị ka oge ọ na-ewe.
Kedu ihe ị chere banyere ụlọ ntu ndị a? Ị chọrọ ịzụta otu?
Ngwakọta Ọkụ Na-ekpo ọkụ - Alice Bailey (PDF)
Ndị Sumer, ndị bi na Mesopotemia bụ ndị ojii